बुधबार यी काम गर्नुहोस्, आर्थिक संकट हटेर जानेछ - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com बुधबार यी काम गर्नुहोस्, आर्थिक संकट हटेर जानेछ - खबर प्रवाह
बुधबार बुध ग्रहको दिन । यसदिन भगवान गणेशको पनि पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ।
बुध ग्रहलाई भगवान विष्णुको प्रतिनिति मानिन्छ, त्यसैले धन, वैभवआदिका सम्बन्ध बुधसँग छ।
बुधको दिशा उत्तर हो र उत्तर दिशा कुबेरको स्थान पनि हो। बुधलाई कुनै महत्वपूर्ण तथ्यहरुको कारक ग्रह पनि मानिएको छ, जस्तै वाणीको कारक, बुद्धिको कारक, त्वचाको कारक, मस्तिष्कको तंत्रिका तन्त्रको कारक आदि।
हरेक आमाले आफ्नो बच्चालाई धेरै माया गर्छिन् र हरेक कुरा आफ्नो बच्चालाई सिकाउने कोशिश गर्छिन्। बच्चाको लागि पनि उनकी आमा संसारकै सब भन्दा राम्रो आमा हुन्छिन्। हरेक आमाले पनि बच्चाको जन्मदेखि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन बच्चाको लागि समर्पण गर्छिन्, तर ज्योतिषको अनुसार केहि राशिका महिलाहरू बच्चा हुर्काउने सम्बन्धमा सबैभन्दा उत्तम आमा हुन्छन्। कुन राशिका महिला ‘सर्वश्रेष्ठ […]
ज्योतिषशास्त्र अनुसार बिहीबारको दिन बृहस्पतिको पूजा गर्नाले सुखद पारिवारिक जीवन, शिक्षा, ज्ञान र धन प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ । शास्त्रअनुसार बिहीबारका दिन केही कामहरु भने बर्जित गरिएको छ । बृहस्पति ग्रहको अनुकूलताको लागि केही यस्ता कार्यहरु हुन्छन् जुन बिहीबारको दिन गर्नु उचित मानिँदैन । बिहीबारको दिन के गर्दा सुभफल मिल्छ ? विज्ञापन १. सूर्य […]